फ्रि भिषा फ्रि टिकेट कुवेतको २ कम्पनिमा रोजगार मासिक तलव रु ७८,९४८ ! - jagritikhabar.com
We Spring Nepal Human Resources Private Limited मा नेपालबाट नेपाली कामदार खोजिरहेका छौं। सम्भावित आवेदकहरूलाई तुरुन्तै आवेदन दिन भनिएको छ। हाल कुवेतमा दुईवटा कम्पनीले रिक्त पदको विज्ञापन गरिरहेका छन्। यो कम्पनी कुवा ड्रिलिंग, व्यापार र रखरखाव केएससी को लागी Burgan कम्पनी हो। र शिमलान र रैसी निर्माण सामग्री। W.L.L. २३९ जना मात्रै पुरुष कामदारको तत्काल माग ।
त्यहाँ मासिक तलब दायरा रु. ३३,५५२ देखि रु. ७८,९४८। कम्पनीको नियम अनुसार काम गर्ने समय दिनको ८ घण्टा, हप्ताको ६ दिन हुनेछ । कर्मचारीहरूले कम्पनीबाट निःशुल्क खाना पाउने हकदार छन्। कर्मचारीको करार दुई वर्षको हुन्छ । कम्पनीले प्रस्थानको देशमा चिकित्सा खर्च र बीमा लागतहरू प्रतिपूर्ति गर्दछ।
आवेदन गरिएको देशमा चिकित्सा खर्चहरू कभर गर्ने आवेदकको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। भिसा र एयरलाइन टिकटहरू संस्थाद्वारा नि:शुल्क उपलब्ध गराइन्छ। सेवाहरू नि:शुल्क र रु १०००० को मूल्यवान छन्। विवरणहरू कसरी आवेदन दिने अन्तर्गत छन्, जहाँ उनीहरूले जनशक्तिलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्छन्। LT नम्बरहरू वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारी बारे थप जानकारी लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने तलको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। धन्यवाद।
नेपाल भर्ती एजेन्सीको नाम स्प्रिङ नेपाल ह्युमन रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेड लट नम्बर 252179 देशको नाम कुवेत । कम्पनीको नाम शिमलान एण्ड रेसी को बिल्डिङ मटेरियल्स WLL स्वीकृति मिति जानकारी २०७८/०८/१२ ।